November 2018 - Puntland Mirror Believable Media Website
November 30, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa galabta oo Jimce ah soo saaray jadwalka soo xulista baarlamaanka cusub iyo doorashada madaxweynaha, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiskiisa. Bayaanka dhexdiisa, ayaa madaxweynuhu ku sheegay […]
November 29, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Duqeyn diyaradaha Mareykanku ay ka geysteen gudaha Soomaaliya ayaa lagu dilay saddex dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab, sida ay sheegeen Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM). Duqeynta ayaa Talaadadii ka dhacday deegaanka Qay Cad ee […]
November 27, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Wax ka yar 40 beri ayaa ka harsan muddo shan sanno ah oo Cabdiweli Maxamed Cali uu ahaa Madaxweynaha Puntland. Inkastoo uusan weli si rasmi ah ugu dhawaaqin in uu mar labaad tartamayo, […]
November 26, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex qof ayaa lagu dilay kadib markii gaari qarax ah lagu qarxiyay irida hore ee dukaamo kuyaala degmada Wadajir ee Muqdisho maanta oo Isniin ah, sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo ilo-wareedyo […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Niman hubeysan oo katirsan Al-Shabaab iyo qof isku soo miidaamiyay gaari qarax ah ayaa weeraray xarun diimeed kutaala koonfurta magaalada Gaalkacyo, waxayna halkaas ku dileen hoggaamiye diimeedkii xaruntaas iyo sagaal qof oo xertiisa […]
November 25, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa beenisay in aysan jirin lacag ay si rasmi ah Dowladda Federaalka Soomaaliya ugu deeqday dhismaha wadada Ceeldaahir-Ceerigaabo, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay Puntland. “Dawladda Puntland waxay la wadaagaysaa ummadda […]
November 24, 2018 Puntland Mirror 0
Garowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Ammaanka Puntland ee PSF ayaa maanta oo Sabti ah sheegay in ay fashiliyeen weerar ay Al-Shabaab qorsheynaysay in ay ku bartilmaameedsato saldhigyada ciidamada Puntland ee buuraha Galgala. “Ciidanka PSF waxay hawlgalkan ku bartilmaameedsadeen […]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland Security Forces (PSF) on Saturday said they have foiled an attack that Al-Shabab planned to target Puntland military bases in Galgala hills. “PSF forces carried out an operation in the areas of […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Haayada sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay in ay fashiliyeen miinada dhulka lagu aaso oo ay Al-Shabaab gelisay degmada Heliwaa ee Muqdisho. “Wada shaqayn dhaxmartay ciidamada Police-ka, NISA iyo shacabka degmada Heliwaa ayaa […]